Ragii dilay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax oo Maanta qisaas lagu fuliyay. – SBC
Ragii dilay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax oo Maanta qisaas lagu fuliyay.
Posted by Webmaster on July 23, 2013 Comments
Magaalada Garoowe Xarunta Puntland Saaka waxaa dil qisaas ah lagu fuliyay 2 nin oo ka mid ahaa ragii loo hayay dilkii Alaha u naxariistee Sheekh C/qaadir Nuur Faarax.
Mid ka mid ah labada nin ee maanta la qisaasay ayaa waxaa uu ahaa ninkii rasaasta la dhacay Sheekha isagoo Masjid ku jiray, islamarkaana ay dadweyne ku qabteen gudaha Magaalada Garoowe, halka ninka kalena lagu soo qabtay isagoo baxsad ah gobolka Sool Puntland.
Waxaa lagu magacaabayay labadan nin ee la toogtay maanta Cabdiraxman Xuseen Jaamac Bile iyo Cabdulaahi Cismaan Axmed ”Caynte”, waxaana xukunkan dilka ah ku xukuntay Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida Puntland iyaga iyo 4 nin oo kale.
4ta nin ee kale ayaan aheyn kuwo iminka gacanta Dowlada ku jira, balse saraakiisha maxkamada ayaa ku amray ciidamada Amaanka Puntland in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo qabtaan.
Sikastaba ha ahaatee Ma ahan markii ugu horeysay oo rag loo geysto dembiyada dilka dad waxgal u ahaa bulshada qisaas lagu fuliyo, waxayna aheyd Bishii afaraad ee sanadkan markii 13 qof oo ay ku jirtay Haweeney lagu fuliyay Dil ka dib markii lagu helay Dilkii alaha u naxariistee Sheekh Axmed Xaai C/raxmaan.